काठमाडौं (पहिचान) साउन ९ – सत्ताको नेतृत्व फेरिएको छ, तर सत्ता पहिलेजस्तै अहिले पनि निर्मम छ। जनताको मतबाट निर्वाचित सरकार तिनै जनतालाई लाठी बर्साउन पछि हट्दैन। वर्तमान सरकार पनि जनतामाथि लाठी वर्षाएर आवाज दवाउन उद्यत देखिन्छ। जुम्लामा अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउँदा देखाएको हर्कत सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
कतिपय साविकका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मेडिकल रिर्पोट माग्ने, कसरी तेस्रोलिंगी भइस्? भन्नेलगायतका कागजात मागेर विभेद गरे, आफूले इच्छाएको नाममा नागरिकता लिन पाउनुपर्ने, शैक्षिक कागजपत्रमा पनि नाम सच्याउन पाउनुपर्ने आदेश माग्दै नील हीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्त, अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र रूपन्देहीकी तेस्रोलिंगी आनिक राना सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको छ। तर सरकारले यो परमादेशको छनकसमेत नपाएको जस्तो गरिरहेको छ। के सरकारले हेर्नुपर्ने समुदायको प्राथमिकतामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नपरेकै हुन्?